Badanaa waxaa loo adeegsadaa si toos ah oo miisaankeedu yahay miisaan, ma fududa in lagu qulqulo agabyada, sida hilibka cusub/barafoobay, iniin khardal ah, jujube iyo wixii la mid ah Aad ugu habboon digaagga, doofaarka, shinbiraha, kalluunka, hilibka lo'da, hilibka lo'da iyo qalabka kale ee aadka u dheggan.
Ku habboon miisaanka si otomaatig ah ama otomaatig ah ee hilibka doofaarka cusub/barafaysan, kalluunka, khudaarta iyo miraha, sida xaleef hilib, salaar, tufaax, iwm.
Auger Filler wuxuu kor u qaadi karaa dhammaan noocyada budo, walxaha iyo mashiinka baakadaha si uu u dhammaystiro quudinta otomaatiga ah, waxaa loo isticmaali karaa kaligiis xaaladaha kale. Ku habboon budo aan muuqan, granular, sida bariis, budada caanaha, milix, budada digirta, iwm.
Codsiyada ugu waaweyn waxay ku habboon yihiin walxaha yaryar iyo budada sida bariiska, sonkorta, burka, budada qaxwada, iwm. Waxyaalaha dheeraadka ah waxay gaari karaan 250mm, quute quute waa xaglo yar oo ah 60 darajo.
Gawaarida badeecadda ee la dhammeeyey waxaa laga sameeyey bir birta ka samaysan iyo suunka saxanka suufka ah ee alaabada polypropylene (PP). Suunka gudbiyaha wuxuu ka samaysan yahay PU sida alaabta ceeriin ah. Qaacidadu waa mid cilmiyeysan oo macquul ah.
Conveyor Bowl inclined waxaa sidoo kale loo yaqaannaa conveyor hoist conveyor, oo inta badan loo isticmaalo gudbinta block yar, granular iyo alaab adag, oo si weyn loogu isticmaalo cuntada, beeraha, dawooyinka, qurxinta, kiimikada iyo warshadaha kale. Waxaa inta badan loo adeegsadaa xalka wiishka labaad oo xaddidan meesha bannaan ee goobta.
Tusaalooyinka: hilibka digaagga, cuntooyinka fudud, cuntooyinka barafoobay, khudaarta, miraha, nacnaca, kiimikooyinka iyo walxaha kale.
Miiska Rotary wuxuu adeegsadaa wareeg si uu u soo ururiyo raashinka baakaysan ee ay xirxireen mashiinka xirxirida, iyo miiska uruurinta Rotary waxaa loo adeegsadaa si otomaatig ah geedi socodka xirxirida. Xirmada la dhammeeyey waxaa loo diraa heerka shaqada ee loogu talagalay xirxirida gacanta ama si loo sii wado nidaamka xirxirida otomaatiga ah, miiska isdaba -rogidda si loo helo oo looga uruuriyo bacaha xariiqda xirmooyinka ka hor xirmada kiiska. Badeecadaha la dhammaystiray waxaa inta badan lagu buuxiyaa mashiinka wax lagu xiraa waxaana loo qaadaa mashiinka maareynta maaddada diskka si loogu xiro.
Gawaarida Belt -ka ee loo yaqaan 'Belt conveyor' waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha xirxirida. Waxaa inta badan loo adeegsadaa gaadiidka tooska ah ee agabyada granular sida tufaaxa, liinta, sabiibta, jajabka baradhada, timirta, lawska, nacnaca, miraha la qalajiyey, bariiska, xawaashka, miraha la qalajiyey iyo wixii la mid ah.
Wiishka nooca Z ayaa sidoo kale loo yaqaan wiishka baaldiga silsiladda nooca Z, oo inta badan loo adeegsado gudbinta dareeraha wanaagsan ee cuntada, dalagyada, sida: lawska, soybeans, bariis, nacnac, miro qalalan iyo cunto kale, laakiin sidoo kale loo isticmaalo qalabka, kiimikada, dawooyinka, gaadiidka maaddada granular. Wiishashka baaldiga ayaa u oggolaanaya koontaroolka quudinta hal ama dhowr boos waxaana si fudud loogu dhexgali karaa noocyada kala duwan ee aaladaha quudinta.
Dhammaan wax soo saarka baakadaha xariiqa shirka, oo loo isticmaalo cuntada, daawada, qurxinta, qalabka, nalalka, alaabta guriga iyo warshadaha kale (boorso, dhalo) badeecooyinka buuxinta (buuxinta), mishiinka wax lagu xiro, koodhka. mashiinka baakadaha barkinta, mashiinka wax lagu duubo oo siman, mashiinka wax lagu duubo oo toosan, mashiinka baakadaha walxaha budada ah, bacda quudinta mashiinka baakadaha otomaatiga ah, alaabta barafaysan mashiinka baakadaha otomaatiga ah iyo wixii la mid ah.
Wiishashka Cuntada, Xamuulka Fayadhowrka, Gudbinta Silsiladda, Z wiishka baaldi, Wiishka baaldiga ee rogaya, Wareega Suunka Gubashada,